NOOCYADA JAJABYADA: SIDA LOO KALA SAARO JIMICSIYADA LA CUNI KARO IYO KUWA LA GOOYEY - SOOSAARKA DALAGGA
Qeexida iyo sawirrada boqoshaada la cuni karo iyo cufan ee qoysaska Russula
Russula (Dhexe Russula) - Kuwani waa fangaska ugu caansan ee kaymaha: waxay ka sameeyaan 30-45% tirada guud ee boqoshaada oo dhan. Waxaa loo magacaabay sababta oo ah qaar ka mid ah noocyada kala duwan ayaa la cuni karaa ceeriin. Waxaa jira maadooyin la cuni karo oo aan la karin. Sidee kafeegaagu u eg yahay iyo sida loo go'aamiyo bal inuu mushahu ku sumoobo horteed ama haddii kale, waxaad ka heli kartaa maqaalkeena.
Qeexida qoyska Russula
Russulae waxay ka mid tahay caanaha boqoshaada agaric ee amarka qoyska agaric ee qoyska Syerazhkov. Meydadkooda miro ayaa ah mid culus, weyn. Si aad u ogaatid julaaca kaynta ku yaal kaynta, waxay noqon kartaa midabyo kala duwan, oo leh dhexroor kala duwan oo ah 2 ilaa 20 cm oo isku xigxig ah, ciriiri ah, gambaleel leh jilicsan cad iyo lugaha cad oo toosan. Waxaad ka akhrisan kartaa midabka jubada ee qaybta "Noocyada Jaamicada". Daboolka cirifka ayaa si fiican u jajaban, taas oo yaraynaysa muhiimadda dhaqaale ee boqoshaadan. Markay baaluqaan, waxay bedelaan qaabkooda, waxay noqdaan kuwo furan, mid caadi ah oo jilicsan, oo mararka qaarkood isku laaban. Mushrooms waxay heystaan ​​taarikhaha hoos u dhaadhaca iyaga oo leh caajis ama cirif leh. Midabka muranka ayaa ka yimid caddaan illaa huruud ah.
Ma taqaanaa? Si loo go'aamiyo nooca loo yaqaan 'rubula' - oo ah shaashad ama tuubbo, waxaad u baahan tahay inaad hoosta ka eegto. Lakabka hoose wuxuu ka kooban yahay taarikado badan.
Ruushku wuxuu kobcaa bisha Luulyo, muuqaalkooda muuqaalka waxaa lagu diiwaan geliyaa bisha Agoosto iyo xilliga dayrta. Asal ahaan, dhammaantood waa kuwo la cuni karo, qayb yar oo ka mid ah ayaa ah mid aan ku haboonayn cuntada sababtoo ah sunta daciifka ah ama dhadhanka aan fiicnayn. Ku haboon tahay inaad isticmaasho foom cusub oo la kariyey. Waxay ku jiraan qaybta saddexaad ee boqoshaada la cuni karo, oo ay ku jiraan boqoshaada celceliska dhadhanka. Qaarkood ayaa hoos loogu soocaa sababtoo ah iyagu ma matalaan qiimaha nafaqada.
Dad badan ayaa laga yaabaa in ay xiiseynayaan su'aasha, hoosteeda wixii geedku ku koray. Xaqiiqdu waxay tahay in boqoshaada ay yihiin dhirta mycorrhiza-dhirta leh xididdada geedka. Badanaa waxaa laga helaa noocyada kala duwan ee ku xusan: Miro, bjørk, alter, iyo sidoo kale geedaha iyo geedaha. Ciyaalka waxaa ku jira tiro ah maadooyin wax ku ool ah, gaar ahaan fiitamiin - 1 kg ee boqoshaada waxaa jira 264 mg oo fitamiin B ah iyo 6 mg oo fitamiin ah PP.
Ma taqaanaa? Cuntada ugu fiican ee la cuno waxaa loo tixgeliyaa tartanka tartiib tartiibka ah ee loo yaqaan 'rubula', taas oo midabkeedu yahay midab cagaaran, buluug, jaalle ah iyo casaan yar.
Noocyada syroezhek (sawirro leh)
Dabeecadda Eurasia, Australia, Bariga Aasiya iyo Ameerika, badanaa waxaa ku jira kaymaha ciriiriga ah oo qallafsan, waxaa jira qiyaastii 275 nooc oo jimicsi ah, waxaan ku siinaynaa sharaxaad kooban oo ah kuwa ugu caansan.
Ma taqaanaa? Maaddaama kala duwanaansho u dhexeeya noocyada sharoobada ay yihiin kuwo aan muhiim ahayn, mararka qaarkood falanqaynta kiimikada ama caddaynta microscopic ayaa lagama maarmaan u ah inay si sax ah u go'aamiso nooca fungus.
Raalli ahaanshaha Russula
Podgodzdok cad (qallalan qallalan). Wuxuu ka muuqdaa laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar keynta qallafsan iyo isku dhafan. Waxaa lagu aqoonsan karaa furka cad, mararka qaarkood jajabyo jaale ah iyo dhinacyo yar yar oo xayeysiin ah. Qaabka qaabka uu u kala duwanyahay way kala duwan yihiin. Lugta gaaban, cidhiidhi gaaban, caddaan ama yar oo bunni ah. In cunto kariye, maraqa qalalan wuxuu diyaariyaa maraqa, saxamada la shiilay, la kariyay. Dhimashadiisa waa mid adag.
Yellow russula. Waxay ku koraan bjhiga qoyan iyo kaymaha cawska. Waqtiga muuqaalka waa Julaay - Oktoobar. Bilowga hore wuxuu leeyahay koofiyado jaale ah. Waqti ka dib, wuxuu u beddelaa guri dabaq ah. Gaaritaan dhexdhexaad ah oo ah 5-10 cm Muuqaalka dabeecadda waa maqaarka diirka oo ka soo baxa lakabadda. Lugaha waa caddaan. Taargooyadu waa caddaan, markii ay noqdaan huruud hurdi iyo cawl. Yellowula waa darajada saddexaad ee boqoshaada la cuni karo. Waxay leedahay dhadhan macaan, aan dhadhan ahayn. Waxaa la wada baabbi'iyey cusub oo la cusbaynayaa.
Caleemaha cagaaran. Mushta, laga helo kaymaha waaweyn. Qalbi leh dhexdhexaad ah 3-10 cm waa midab buluug ah. Midabku waa mid aan simanayn: waxay noqon kartaa mid madow-guduud ah oo ku yaal bartamaha, oo u jeedda geeska. Lugta waa caddaan, 3-5 cm sare.
Cagaaran Russula. Dadka degan xayawaanka qallafsan iyo qallafsan. Waxaa lagu aqoonsan karaa kuleyl cagaaran oo cagaar ah oo cagaaran oo dhererkiisu ka hooseeyo 10 cm, inkastoo ay muuqato mid muuqata oo aan muuqaal lahayn, midhuhu wuxuu leeyahay dhadhan wanaagsan. Waa cusbayn, la shiilay oo la karkariyey.
Ma taqaanaa? Haddii aad ka fikirtid waxa fangaska sunta ah aad si fudud ugu wareersan tahay cagaarka cagaaran iyo cagaaran, ka dibna tani waa cagaar cagaaran. Si kastaba ha noqotee, syroezhek wax lug ah kuma lahan lugta oo adkeynaysa saldhigga.
Cuntada Russula. Koofiyadan jilicsani waxay leedahay midab qurux badan oo soo jiidasho leh - casaan leh calaamado cawl. Lugta waa siman, cadaan. Wuxuu imanayaa Luulyo - Sebtembar. Waxay badanaa ku koraan kaymaha adadag iyo caleemo qulqulaya.
Kusoo rogay Russula. Ka muuqata xagaaga dambe - kooxaha dayrta xilliga dayrta hore ee kaymaha qallafsan. Waxay leedahay cadaadis-ku dabool khafiif ah oo cagaar ah oo madow ku dhow xarunta. Lugta waa caddaan iyadoo xayndaabka madow ee saldhigga.
Marsh Russula. Waxay magaceeda ka heshay xaqiiqda ah in badanaaba laga helo goobaha cakiran, kaymaha geed. Marka qoryaha tartiib tartiib tartiib ah u soo baxaan, inta badan waa qoyaan iyo qoyan. Waxay ka koraysaa bilaha Juun ilaa Sebtembar. Da'da yar ayaa leh koofiyad buluug ah, mustaqbalka waxay noqotaa midhicil. Waxaa lagu rinjiyey casaan, u dhaw xarunta - bunni. Lugta waa caddaan, waxay ku timaadaa hooska casaan. Mushahar waa mid macaan, ku haboon karkarinta, saliid, pickling iyo salting.
Green Russula. Wuxuu ku koraa inta badan xagaaga illaa Oktoobar. Waxay ku nooshahay kaymaha adkaa oo isku dhafan, badanaaba geedo cagaar ah. Waxay leedahay dabool weyn - ilaa 15 cm dhexroor. In siroezhek cagaarsho yar ayaa ah mid isdifaacid ah, iyadoo waqti gaaban ama salaad ah. Xannuunsanaan-cagaaran ama cagaar-cagaar. Marka aad cunto karisid, waxaa loo isticmaalaa in la kariyo, karkariyo iyo saliin ka dib markii la jarayo.
Cagaar iyo casaan. Wuxuu bilaabaa inuu koro bartamaha xagaaga. Waxaa lagu arkaa ballaar weyn oo suunji ah oo ah ilaa 20 cm midabyo dhalaalaya: casaan, jaalle, mado guduud. Lugta ayaa leh height 3-12 cm iyo dhexroor ah 4 cm, caddaan ah, mararka qaarkood leh shinni casaan.
Caleemaha buluuga ah. Mushaarooyinka noocan ah ayaa laga soo ururin karaa laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar. Kabaha noocyadaas ku jira foomka si fiican u qumman ayaa ah cagaar ama mado guduud ah. Lugta waa weyn tahay, badanaa caddaan ah, laakiin waxay noqon kartaa mid guduudan iyo guduud. Mushroom dhadhan fiican. Waxay ku xiran tahay qaybta saddexaad.
Hadda waxaad taqaanaa jacaylka jilicsan ee u eg. Waxaa sidoo kale jira qayb ka mid ah boqoshaada xaalad ahaan la aqriyo, taas oo yeelan kartaa dhadhanka xun, ma habboonayn karinta, laakiin ku haboon ee pickling. Cuntada la cuni karo waxaa ka mid ah: xayawaan jilicsan, gabar, ocher, dahab dahabi ah, qurux badan, madow podgruzkakh, podgruzdok white, podgruzdok madow, walui, rusule gray iyo kuwo kale.
Ka dibna waxaanu la socon doonaa wakiillada aan la dabooli karin ee qoyska.
Jaamacadaha aan la daboolin
Isla markiiba waa lagama maarmaan in la sameeyo boos celin aan lahayn siroezek sun ah oo macnaha tooska ah ee ereyga. Noocyada aan la dabooli Karin waxaa ka mid ah boqoshaada leh dhadhan jilicsan, dhadhan jilicsan, oo ka mid ah waxay noqon kartaa sun yar ama sun ah, taas oo keeneysa cuncun maskaxaha afka, xanuunka qafiifka ah ee mindhicirka marka la kulmo. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay leeyihiin calaamado dibedda ah oo la mid ah walaalaha la cuni karo, sababta oo ah waxaa loogu yeeraa qalooc musuqmaasuq ah. Boqoshaada aan sunta ahayn ee aan la isticmaalin waxaa ka mid ah: russula bjørk, cas, casaan, Kele, jilicsanaan, qosol, caan ah iyo kuwo kale.
Birch Russula. Koofiyadaha xajka ah ee ku yaala rubucan waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo midabo dhalaalaya iyo midabo: casaan, casaan, guduud, cawl. Calaamadeynta jajabyada leh caleemaha bjørk. Wuxuu dhacaa bisha Juun ilaa Nofembar.
Rosula waa casaan. Waxay ku koraan kaymaha geedaha xagaaga dambe - horraantii Sebtembar. Daboolka boqoshaada waa yar yahay - ilaa 6 cm, midab-kabxan, casaan madow oo midab leh. Tani waxay kufaraxdaa wanaagsan oo waxay leedahay dhadhan.
Pink Russula. Sidoo kale noocyada hore, waxaa laga helaa kaymaha geedaha ah ee Agoosto-Sebtembar. Daboolka bilowgii hore ee horumarku wuxuu leeyahay qaab isku dhafan, ka dibna wuxuu noqdaa mid sujuudsan. Buuxiyey casaan. Russula waa dhadhan qadhaadh.
Kele Russula. Waxay leedahay dabool yar oo 3-8 cm dhexroor. Marxaladaha kala duwan ee horumarinta, waxay bedeshaa qaabka: waxay ka socotaa wareega-wareegga si ay u sujuudaan oo u sujuudaan geesaha cirifka. Midabkeeda madow ee madow - guduud, guduud, burgundy. Lugta guduudan-cas. Dhadhanka caanahaani waa mid adag, urta way fiicantahay.
Russula way jabtay. Badanaa waxay ku koraan kooxaha koox kasta noocyada kala duwan ee kaymaha. Koofiyadeeda waa 3-5 cm, oo salka u fuushay maqaarka cas. On cidhifyada maqaarku waa casaan cad, brown si ay xarunta, dhar guduudan leh tingheer ah. Jidhkoodu waa jaban yahay, oo waxay ka dhergeen jidhka.
Caanaha sunta ah ee la cuni karo waa mulkiil Mayr iyo jilbaha gubashada.
Mayra's Russula. Russula wuxuu leeyahay dhowr dabeecadood oo muuqaal ah, sharrax kooban ayaa kaa caawin doona inaad garatid markaad la kulanto oo aad gudubto. First of dhan waa koofiyado hodan ah-cas. Marka ugu horeysa ee qaab-dhismeedka, ka dibna ku haboon, wax yar oo niyad-jaban. Lugta waa caddaan, waxaa laga yaabaa in ay noqoto mid madow ama huruud ah oo saldhig u ah. Waxay ku koraan kaymaha beehlka. Marka la isticmaalo kicinta sunta khafiifka ah.
Russula ayaa cambaareynaya. Waxay ku nooshahay kaymaha geedo qoyan. Waxaa lagu gartaa faraan guduud ah ama midab casaan leh oo leh dhexroor 10 cm, dabaq adag, iyo qaabka dambe ee sujiga. Waxay leedahay dhadhan aan fiicnayn iyo ur aan fiicnayn.
Sida loo kala soocayo cunnada la cuno ee ka soo jeeda jaamicadaha
Go'aami haddii uu bariiska ka hor inta aadan cuni karin ama la cuni karin, waxay noqon kartaa sababo dhowr ah. Sidaas awgeed, jidhka cufan, jilicsan, midab casaan ah dhamaadka lugta, waxyeello maaha qoryaha, taarikada adag, filim ama lugaha lugta ayaa ah dabeecad. Dhammaan noocyada aan la cuni karin ee syrozhek, sida caadiga ah (laakiin mar kasta ma ahan), waxay leeyihiin midab la isku qurxiyo iyo ur aan fiicnayn. Markaad dillaacdo iyo karkarinta jidhka ayaa isbedela midabka.
Waa muhiim! Tilmaamahani waxa uu ku jiraa noocyo wax lagu cuni karo oo jajab ah.
Waxaad u baahan tahay inaad ka taxadirto inaadan qaldanayn cagaar cagaaran oo la cuni karo oo leh sunta qamriga, taas oo aad u eg. Waa kuwan kala duwanaanta qaabdhismeedka iyo midabka lugaha iyo furayaasha aad ka heli karto faa'iido leh.
Lugta. Gudaha jaceylku waa mid toosan, waxaa laga yaabaa in hoos loo dhigo, caddaan. Inadstool, waxaa lagu dhajiyaa saldhig u ah qaabka tuberka, wuxuu leeyahay giraan iyo iftiin cagaaran ama midabada huruudka ah iyo walwalka.
Hat. Pale grebe wuxuu leeyahay filim ka hoos.
Waa muhiim! Qalabka qoyan ee dabiiciga ah waxaa laga yaabaa inaanay laheyn sifooyinka dabeecada ee boqoshaada sunta ah - lugaha lugta.
Gargaarka koowaad ee loogu talagalay sumoobidda
Inkasta oo, sida aan horay u qoreyno, roodhada aan khatar gelin karin caafimaadka bini'aadamka, si kastaba ha noqotee, xitaa haddii uu ku dhaco sumad fara badan, cunidda fungus sunta waxay u baahan doontaa gargaar deg-deg ah. Xaaladda jimicsi, waxaa loo baahan yahay baraarid afka ah, waxaa suurtagal ah inuu keeno matag iyo qandho dhadhan. Haddii uu jiro sumo halis ah boqoshaada sunta leh, waxyeelada mareenka mindhicirka, nidaamka wadnaha, CNS, beerka iyo kelyaha ayaa dhici kara. Waxaa muhiim ah in laga caawiyo astaamaha ugu horreeya ee sumowga. Tan iyo markii, tusaale ahaan, daaweynta dhaawacyada ay sababeen toadstool, oo la qaado maalinta labaad, ayaa horeyba u noqonaysa wax aan micne lahayn.
Fikrado badan oo sunta ah waxay keenaan saameyn gaar ah markii la qaado gudaha, laakiin waxay yeelan doonaan shuban, matag, iyo xanuunka caloosha. Calaamadaha ugu horreeya ee sumowga ayaa dhici karta waqtiyo kala duwan, iyadoo ku xiran fungus cunnida. Sidaa darteed, tusaale ahaan, sumowga leh cagaar cagaaran ayaa u muuqan doona 8-18 saacadood, iyadoo leh khadadka - kadib 6-10 saacadood, oo leh dhoobo-agarics - 30 daqiiqo kadib ama 2-6 saacadood, oo leh boqoshaada beenta - ka dib 1-6 saacadood. Si aad uga saarto sunta jidhka, waad isticmaali kartaa matag. Sababta, cabitaanka galaas biyo diirran leh 1 qaado oo cusbo ah ama 1 qaado oo ah iniin khardal ah. Waxaad sidoo kale ku dhali kartaa matag iyada oo la cabbo qadar badan oo biyo qabow ah, ka dibna laba farood ayaa riixaya xididka carrabka.
U hubso inaad caloosha dhaqdo. Kadib qaabsocodka, qofku wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo dhuxusha firfircoon (1-2 kiniin ah 1 kg oo culeys). Sida aad arki karto, noocyada jamacyada waa badan yihiin. Nasiib darro, marwalba ma fududa in la kala saaro inta udhaxeysa jinka la cuni karo iyo kuwa la cuni karo. Mararka qaarkood xitaa sifooyinka noocaas ah sida midabka, urta iyo dhadhanka ma awoodi doonaan inay ku caawiyaan. Xusuusnow: adigoo shaki yar u ah in mushkiladu wanaagsan tahay ama sunta horteeda kuugu jirto, waxaa fiican inaad ka takhalusto.